चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको तलब कट्टा नगर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय – Health Post Nepal
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको तलब कट्टा नगर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय
२०७६ चैत २८ गते १६:५०
बुधबार ५६८ जना नेपाली विदेशबाट फर्किए
२७ दिनपछि डिस्चार्ज भइन् दोस्रो कोरोना संक्रमित महिला
११४ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमित संख्या ८८६ पुग्यो
थप ५१४ जनामा कोरोना, संक्रमणबाट ९९ जनाको मृत्यु
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको तलब कट्टा नगर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार नियमति पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको निर्णय कट्टा नगरेको बताएका हुन् ।
११ चैत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कर्मचारीको ३ देखि ७ दिनसम्म्को तलव काटेर कोषमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने मन्त्रालयले अपिल समेत गरेको छ ।
हालसम्म ३ हजार ५ सय २४ नुमना परीक्षण भएको प्रवक्ता डा. देवकोटाले जनाकारी दिए । गत २४ घन्टामा ६ सय ३० नमुना परीक्षण भएको छ । जसमध्ये उपत्यकामा ४ सय १ र उपत्यका बाहिर १ सय २९ परीक्षण भएको छ, डा. देवकोटाले भने,‘ नियमित परीक्षणको दायारा बढाउँदै गएका छौ ।’
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ८ सय भन्दा बढीको परीक्षण रन भइरहेको उनले जानकारी दिए । शुक्रबार देशभर ८ हजार ६ सय ६१ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने १ सय २५ जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।